Nhazi kachasị mma iji gbagoo desktọọpụ egwuregwu | Akụkọ akụrụngwa
Nhazi kachasị mma iji gbagoo desktọọpụ egwuregwu
Mgbe ị na-ahazi desktọọpụ dị mma, ihe mbụ ị ga-atụle bụ "gịnị maka", ya bụ, kedu ihe bụ isi ọrụ anyị ga - arụ Na ya, desktọọpụ nke nwa akwụkwọ jikọtara kọmputa ya na ndetu, akwụkwọ, ihe ederede, wdg, abụghị nke desktọọpụ nke onye ọrụ na-eji kọmputa na-agagharị na Internetntanetị ma na-ekiri ihe nkiri na usoro ya kachasị amasị. tebụl nke onye na-egwu egwuregwu zuru oke, onye na-etinye ọtụtụ awa na awa n'ihu nyocha ahụ ma nwee ọtụtụ ngwa.
Taa, anyị ga-elekwasị anya na ụdị onye ọrụ ikpeazụ a, onye ọrụ egwuregwu egwuregwu, anyị ga-enyekwa gị ụfọdụ igodo nke na-enye ohere ịmepụta oghere egwuregwu dị mma, ịga akụkụ dị ka tebụl n'onwe ya, ihe ndị anyị ga-edozi na ya ma n'ezie, oche ahụ, nnukwu nchefu ahụ bụ nke mejupụtara ogidi dị mkpa nke tebụl egwuregwu ọ bụla. Ergonomics na nkasi obi bu igodo di nkpa. Anyi ka anyi bido?
1 Desktọọpụ egwuregwu kacha mma
3 Ileba anya
4 Ngwa dị na mpụta
Desktọọpụ egwuregwu kacha mma
Ọ bụrụ na anyị agbatị na tebụl n'onwe ya, tebụl dị mma maka gamer bụ nke nwere ọdịdị L. Ihe kpatara ya doro anya, mana anyị ka ga-egosi na ọ ga-enye ndị ọzọ ngwaọrụ niile, ngwa yana ndị ọzọ anyị nwere na desktọpụ. Ọzọkwa, tebụl a kwesịrị ezu obosara ma saa mbara, na-ezere na ihe ndị echekwara na ya na-enye mmetụta nke "igwe mmadụ". Tebụl nwere ụkwụ anọ bụkwa tebụl, agbanyeghị, ọ bụghị maka nke ahụ, mana maka ịmepụta ergonomic na ohere dị mma.
Ọ dịkwa mkpa na tebụl a gụnyere oghere nke a ga-eji gafee eriri nke mere na eriri ike na njikọta ndị ọzọ apụtaghị n'anya ma na-ewereghị ohere na tebụl. Ọ bụ ajụjụ mara mma, mana ọ bụkwa ajụjụ na-arụ ọrụ.
Banyere ụkwụ okpokoro, anyị ekwuola "ụkwụ anọ", mana nke ahụ adịghị mma. Ezi ndụmọdụ bụ ịnwe akpati obi gaa n'otu akụkụ, ọkacha mma ma ọ bụrụ na ọ na-eme dịka ihe nkwado maka mbadamba ma jikọta ya. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enweta ihe niile anyị chọrọ.
N'akụkụ nke ọzọ nke tebụl ọ ga-adị mma nwee oghere dị mkpa maka ụlọ elu ahụ nke kọmputa, mma ma ọ bụrụ na ọ na-elu na-akwanyere ala. Nke a bụ otu anyị ga - esi nwee ike ịnweta akụkụ a dị mkpa.
Laghachi n'elu tebụl ahụ, ọ dị mkpa ka ị nweta a nyochaa guzoro. Na ahịa dị ugbu a ị nwere ike ịchọta ha n'ọtụtụ ụdị, atụmatụ na ọnụahịa, mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ị na-ewelite ihe nlele ahụ nke mere na ọ dị n'ogo nke anya gị. Na mgbakwunye, ọ ga-abụ nke agbakwunyere ma ọ bụrụ na ọ bụ akwa dị n'okpuru, n'ihi ya ị nwere ike "zoo" ihe ị na-anaghị eji oge niile, desktọọpụ egwuregwu gị ga-ele anya nke ọma na usoro.
Ihe ọzọ dị mkpa nke ezigbo oche eji egwu egwu bụ oche. N'iburu n'uche na ị ga-anọ ọtụtụ awa n'ihu ihuenyo ahụ, ịchọrọ oche oche oche a haziri maka ogologo oge, nke ọma na ergonomic. Dịka ọmụmaatụ na Livingo Spain ha nwere ezi nhọrọ.
Mgbe ị na-ahọrọ oche gamer gị, ị ga-eburu n'uche karịa akụkụ abụọ niile. Nke mbụ, nke ahụ bụ ịdị elu mgbanwe, nke mere na ị nwere ike imeghari ya na elu nke tebụl gị na ileba anya gị. Nke abụọ, nke ahụ nwere ihe nwere ike ịgbanwe azụ enwe ike ịzaghachi ụdị ahụ gị, yana a elu-kemeghi kwushin na ana achi achi lumbar nkwado. Naanị n'ụzọ a ka ị ga - ahụ na ị ga - ejigide ọnọdụ zuru oke, ahụike na ziri ezi maka azụ gị, ọ dị mma iji nọrọ ọtụtụ awa na elekere na-egwu egwuregwu kachasị amasị gị na enweghị ihe egwu ọ bụla.
Akụkụ ndị ọzọ ị ga-atụle nke ọma mgbe ị na-aga ịzụta oche egwuregwu gị bụ:
Hasnye nwere a n'olu kwom onye ị nwere ike idozi elu ya iji zere mgbu olu, isi ike, wdg.
Nke ahụ nwere ezigbo wiil, na-eguzogide ọgwụ ma na-adị mfe iji na-emegharị njem gị.
Na padding Oké osimiri dị jụụ ma kwụsie ike, ọkacha mma ụfụfụ ma ọ bụ owu.
Onye nwe armrest nakwa na ndị a dịkwa mma na ịdị elu
Na ihe eji eme ya bụ mfe ọcha, dịka ọmụmaatụ, polyurethane.
Anyị agaghị abanye na teknụzụ nkọwapụta nke ezigbo kọmputa gamer kwesịrị inye, ị maraworị nke ọma, ma ka m mma, mana anyị ga-ekwu maka monitor. Ihe bụ isi na ileba anya bụ, na mgbakwunye na nha ya na ogo ya, nke o nwere elu ume udu. N'iburu n'uche na ndị nlegharị anya na-aga gburugburu 75 ma ọ bụ 100 Hz, ị ga-ebuli ugboro ole ahụ na 144 Hz. You ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ n'ahịa maka ụdị ndị ama ama dịka Asus, LG, Samsung, Benq, were gabazie. Na n'ezie, eledala nhọrọ nke nyocha 3D anya.
Ngwa dị na mpụta
Banyere ngwa dị n'akụkụ, ndị a dị mkpa maka onye ọ bụla na-egwu egwuregwu. Ndị ụlọ ọrụ mara nke a na ụfọdụ n'ime ha kere oke na ahụigodo ndị ahaziri iji mee ka arụmọrụ rụọ ọrụ ọbụlagodi ụdị egwuregwu dị iche iche. Iceké na programmable bọtịnụ maka egwuregwu nwere ọtụtụ odide nwekwara ọtụtụ omume dị, ergonomic ụmụ oke, volante n'ihi na ndị na-atọ ụtọ nke egwuregwu ọgba tum tum, wdg.
N'ezie, Ọzọkwa ute Ọ ga-abụ nke pụrụ iche, obosara iji kwe ka nnwere onwe dị ukwuu nke ịgagharị, ma kachasị njọ iji mee ka nkenke nke agbapụ gị na egwuregwu egwuregwu, dịka ọmụmaatụ.
Abịa na keyboard, ị kwesịrị ị na-ahọrọ a keyboard usoro igodo ọ bụla nwere mgbanwe nke ya, oge nzaghachi ahụ dịkwa mkpụmkpụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ nwere agba dị iche iche iche na mpaghara ma ọ bụ ọbụna usoro ọkụ ọkụ ọkụ, ọbụlagodi ka mma. Logitech, Razer, LG, Corsair ma ọ bụ Microsoft bụ ụdị ndị kachasị mma maka ụdị mpempe akwụkwọ a.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ndị a dị mfe ma ezi uche dị na ndụmọdụ ekele nke ị ga-enwe ike kpọkọta a gaminggba Cha Cha desktọọpụ nke ị ga-enwe dị ka ị na-echetụbeghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Nhazi kachasị mma iji gbagoo desktọọpụ egwuregwu
Ndị njikwa atọ dakọtara na-abata na PlayStation 4
NVIDIA agaghị emelite mbadamba ọta ya na gam akporo 8.0